I-Chilling Lakeside eLake Macquarie - I-Airbnb
I-Chilling Lakeside eLake Macquarie
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Lucio & Julie
U-Lucio & Julie Ungumbungazi ovelele
Uma ufuna ukuphumula noma ube nomsebenzi ogcwele ukuphunyuka, sikunikeza kokubili.
Ikhaya lesimanjemanje, elihlome kahle eliphambi kwechibi elinotshani obuthambile obushelelayo onqenqemeni lwamanzi olusithwe yizihlahla ezinkulu. Ama-Kayak/Canoes ahlinzekwa ngamajakhethi okuphila namabhayisikili anamakalabha. Inala indawo yokuthi izingane zidlale ngenkathi uhlezi emuva ngaphansi kwevulandi elingaphansi noma emabhentshini azungeze umgodi womlilo uphethe isiphuzo esandleni ubuka ukushona kwelanga okumangalisayo. I-BBQ ihlinzekelwe ngezidlo ezikhululekile zasehlobo zangaphandle nokuzijabulisa.
Kungakhathaliseki ukuthi uthanda iholide eliphumuzayo noma imisebenzi egcwele, sinakho konke.
• Ikhaya lesimanjemanje, elihlomele kahle eliseceleni kwechibi
• Ukuphumula komgodi womlilo ongaphandle
• Amakayak nezikebhe kuhlinzekwa ngamabhantshi okuphila ezinhlobonhlobo
• Amabhayisikili nesikuta esinezigqoko zokuzivikela ezilungiselelwe umndeni
• Indawo ekahle ye-BBQ yomndeni wakho ophumulele enendawo yokudlela yangaphandle kanye nokubukwa okuhle
• Igumbi lemidlalo elihlonyiswe ngokugcwele elihlanganisa ne-Pool Table ukuze wonke umuntu alijabulele
• Izinhlobonhlobo zemidlalo yebhodi, izincwadi nama-DVD nazo zihlinzekwa.
. I-Wifi yamahhala
• Indawo ekahle yokuphumula nomndeni noma ukubaleka ekubalekeni kwezothando
• Amabhishi Amahle kanye namapaki kazwelonke akuhambo olufushane nje kuphela
• Leli khaya linamakamelo amane aphezulu alala abantu abadala abayi-7 kuze kufike kwayi-9 kuhlanganisa nezingane.
• Amakamelo amabili okulala angamakhosi, elinye lijabulela ingubo yokugqoka, i-TV kanye ne-ensuite kanti elinye linendawo yokuphumula yabazali encane enegumbi lokuphumula ne-TV futhi lijabulela ukubukwa okuhle kwamanzi.
Ikhaya Lesimanjemanje, ikhaya elihlome kahle eliphambi kwechibi elinotshani obuthambile obushelelayo onqenqemeni lwamanzi olugubuzelwe yizihlahla ezinkulu zosinga. Amakayak nezikebhe kuhlinzekwa ngamabhantshi okuphila ezinhlobonhlobo namabhayisikili anamakalabha. Ngendawo eningi yokuthi izingane zidlale ngenkathi uhlezi emuva ngaphansi kwevulandi elingaphansi noma emabhentshini azungeze umgodi womlilo uphethe isiphuzo esandleni ubuka ukushona kwelanga okumangalisayo. Ibarbeque ihlinzekwa ngesidlo sakusihlwa sangaphandle sasehlobo esikhululekile nokuzijabulisa.
Ikhaya linokubukwa okuhle kwamanzi okuvela ekhishini, emndenini nasegunjini lokudlela kanye negumbi lokuphumula.
Igumbi lemidlalo lihlelwa ngetafula le-pool kanye ne-dartboard ukuze kugcinwe izingane zijabulile kanye nokukhuthaza ubumnandi obuhle bomndeni ngemva kosuku emanzini noma lapho isimo sezulu sifuna imisebenzi yasendlini. Imidlalo yebhodi, izincwadi nama-DVD nakho kuhlinzekwa.
Ukufinyelela kujethi phambi kwendlu kanye ne-buoy yangasese ongabophela isikebhe sakho kuyo. Kukhona nerempu yomphakathi engamamitha angu-700 ezansi nomgwaqo ekwazi ukufinyelela epikinikini kanye ne-BBQ reserve enendawo yokubhukuda evalekile.
Leli khaya lisogwini oluseningizimu yeLake Macquarie elihle okuyichibi elikhulu kunawo wonke e-Australia elinamanzi anosawoti aphakathi nezwe. Itholakala ekugcineni enyakatho ye-NSW Central Coast futhi iwuhambo olunethezeka lwemizuzu engama-70 ukusuka e-Sydney. Ikhaya lisemgwaqweni othule ohlinzeka ngamapaki ezimoto amabili asemgwaqweni kanye nendawo yokupaka eyanele yomgwaqo.
ILake Macquarie ilungele yonke imisebenzi yamanzi okuhlanganisa ukuhamba ngomkhumbi, ukushushuluza emanzini, ukugibela i-wake boarding, ukugibela izikebhe, ukubhukuda nokudoba futhi ichibi likhulu ngokwanele ukuthi alilokothi ligcwale izikebhe. Yindawo ekahle yokuphumula nomndeni noma ukubaleka lapho uvakashele khona ezothando.
Amabhishi Amahle kanye namapaki Kazwelonke akuhambo olufushane nje kuphela. Izincwajana zezivakashi zendawo kanye namamephu kunikezwa ukuze uphequlule.
Ibekwe onqenqemeni lwamanzi azolile leli khaya linamagumbi okulala amane aphezulu alala abantu abadala abayi-7 futhi afika kwabayi-9 kuhlanganisa nezingane. Amakamelo amabili okulala angamakhosi, elinye lijabulela ingubo yokugibela, i-TV kanye ne-ensuite kanti elinye linendawo yokuhlala encane yabazali enegumbi lokuphumula ne-TV futhi lijabulela ukubukwa okuhle kwamanzi. Igumbi lesithathu lokulala linombhede ophindwe kathathu (umbhede owodwa ngaphezu kombhede ophindwe kabili), igumbi lesine linombhede wenkosi eyodwa, amakamelo okulala amaningi anombono wamanzi. Igumbi lokugezela elikhulu limaphakathi namakamelo okulala futhi lihlanganisa ishawa nokugeza.
Ama-Doona anikeziwe, ilineni namathawula okugeza ayatholakala uma ecelwa ngezindleko ezengeziwe.
Indawo yokuwasha enosayizi ogcwele phansi inomshini wokuwasha, isomisi nezinsiza zoku-ayina kanye nendlu yangasese ehlukene. Ikhishi lesimanje elinebhentshi le-granite, i-cooktop ye-ceramic, i-dishwasher, ifriji yensimbi engagqwali kanye nomshini wekhofi we-Nespresso.
Ngaphandle kwendawo engasemanzini, ukushona kwelanga okuhle nokuzola kuyizici eziningi zekhaya ukuqinisekisa ukuhlala okuphumuzayo.
***Sicela uqaphele: - Le ndawo ihlelelwe imindeni kanye namaqembu abangani abazoyithokozela, amaphathi nemikhosi enomsindo, okuhlanganisa nenkunzi, izikhukhukazi kanye nezikole akuvunyelwe noma kubekezelelwe, lokhu njengenhlonipho komakhelwane abaseduze.
Siyaxolisa, kodwa ngenxa yezehlakalo ezimbalwa ezingezinhle, i-Chilling Lakeside ayiseyona i-Pet Friendly kubavakashi nezivakashi zabo.
'I-Chilling Lakeside' ihamba imizuzu emi-5 kuphela ukuya ezitolo zasendaweni ezifaka i-pizzeria, isitolo sokudla, isitolo sebhodlela, ikhefi, ibhikawozi, isitolo sekhofi, iposi kanye nesiteshi senkonzo esisebenza njengesitolo esijwayelekile.
Imizuzu emihlanu uma ushayela uye e-Doyalson enyakatho uzothola i-Woolworths, i-BWS, i-Jamaica blue cafe, ama-takeway okuhlanganisa, i-Asian, i-Indian, i-kebab, i-subway. Inxanxathela yezitolo iLake Haven iyimizuzu eyi-10 kuphela yokushayela futhi inazo zonke izidingo zakho zokuthenga okubandakanya indawo eyi-cinema eyi-8 kanye nesikhungo sokungcebeleka sangaphakathi.
Iklabhu ye-Doylos RSL iyimizuzu emi-5 yokushayela lapho ungajabulela khona ukudla okumnandi e-bistro noma indawo yokushisa ye-barbeque yesitayela saseMelika kanye nebha lapho kukhona indawo yokudlela engaphandle yomshoshaphansi. Ibhasi lokuhlonipha liyatholakala.
ITuggerah Westfield iyimizuzu engama-20 yokushayela inamabhayisikobho nezindawo zokudlela eziningi.
Ibungazwe ngu-Lucio & Julie
Ngizotholakala ngocingo 24/7 ukuze ngisize nganoma yimiphi imibuzo.
ULucio & Julie Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-8760